Everton Oo Cashar U Dhigtay Manchester United, Dhaawaca Rooney iyo Oohinta Ciyaartoyga
HomeWararka MaantaEverton Oo Cashar U Dhigtay Manchester United, Dhaawaca Rooney iyo Oohinta Ciyaartoyga
Ciyaartooyada Manchester United ayaa garoonka ka baxay iyaga oo madaxoodu hoos u fooraro, isla markaana ka baqaya in ay wejigooda siiyaan taageereyaasha, kadib markii ay guul-darro qadhaadh la kulmeen kulankii labaad oo xidhiidh ah.
Ciyaar aad u xiiso badnayd oo dhex martay Everton iyo Manchester United ayaa ku dhamaatay 3-0 ay ku badisay Everton oo garoonkeeda joogtay.
Daqiiqaddii 5aad ee bilowga ciyaarta ayay Everton u damaashaadday goolka koowaad kaas oo uu James McCarthy si qurux badan inta uu kubadda ugala dhex baxay laba difaac ah ku hubsaday shabaqa gool-haye De Gea. Intii ayna qaybta hore dhamaanin ama daqiiqaddii 35aad ayay mar kale Everton heshay goolka labaad kaas oo uu madax ku dhaliyey John Stones, waxaana qaybta hore ee ciyaartu ay ku dhamaatay 2-0 ay hoggaanka kula nasatay Everton.
Qaybtii dambe markii la isugu soo noqday ayay halkii ka sii wadday wacdaraha kooxda Everton waxaana kubbad qurux badan shabaka Manchester United dhex dhigay Kevin Mirallas. Goolka saddexaad ayaa su’aal geliyey tayada difaaca Manchester United kaas oo meel ay ku maqnaayeen la garan waayey markii uu goolka dhalinayey Mirallas.
Guul-darradan waxa u sii raacday Manchester United murugo kale oo ahayd in uu garoonka dhexdiisa socon kari waayey kabtankooda Wayne Rooney kaas oo la arkayey in uu dhaawacmay, isla markaana laga saaray garoonka markii uu taayir rogi kari waayey.
Kabtankii hore ee kooxda Manchester United, Roy Keane oo ciyaarta daawanayey ayaa weji gabax la kulmay, waxaana la arkayey isagoo dhabannada haysta, lana yaabban wax helay kooxdiisii hore.
Guul-darradan Manchester United ayaa ah tii labaad ee xidhiidh ah, iyadoo toddobaadkii horena ay Chelsea ku garaacday 1-0.
Rasmi: Xulka Gobolka Hawd Oo Lagu Dhawaaqay Iyo Magacyada Ciyaartoyga Ku Jira
Burton Albion vs Leeds United 1-2 All Goals & Highlights (26/12/2017)